Breaking News , May 26, 2020
ကျွန်မတို့ ယခုလုပ်ဆောင်မှုများဟာ နောင်အတွက် ရင်းနှီးမှုများဖြစ်စေချင်ကြောင်း ကျွန်မ မနေ့က ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်အခြေအနေမဆို အဆိုးဘက်ကို ရောက်သွားမလား၊ အကောင်းဘက်ကို ရောက်သွားမလားဆိုတာ ကာယကံရှင်များအပေါ် အများကြီးမူတည်ပါတယ်။ ပြည်ပမှ ကျွန်မတို့နိုင်ငံသားတွေ အများအပြား ပြန်လာနေချိန်မှာ အတွေးလေးတွေ...
မေလ ၂၄ ရက်​နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ အသံတုရဲမြင့်လေး အသက် (၈၁) နှစ်ရဲ့ စျာပနာအခမ်းအနားကို မေလ ၂၆ ရက်​နေ့က ကျီစု သုသာန်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ...
မန္တလေးမြို.တော်ကို လမ်းမီးတွေ ဘယ်လိုတပ်ဆင် ထွန်းညှိခဲ့တယ်ဆိုတာကို မြို.တော်ဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲလွင်က သူ.ရဲ.ဖေ့စ်ဘွတ် မှာအခုလိုဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ မြို့တော်လုံခြုံရေးအတွက် လမ်းမီးတိုင် စံချိန်တင်စိုက်ထူတဲ့နှစ်။ ———————————————- ၂၀၁၉-၂၀ ဘတ်ဂျက်ကာလမှာ လမ်းမီးတိုင် အသစ် ၁၀၅၅၉ တိုင်ကို စွမ်းအားအပြည့်နဲ့ နေ့ရောညပါ...
ရှင်ဥပဂုတ္တ ရေချပူဇော်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာနဲ.ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကို Yangon Nation က ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ အခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဖြေလျော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေအရ အခြား လုပ်ငန်းတွေ ပြန်စသလိုပဲ ဗိုလ်တထောင်စေတီတော်ကြီး ဘက်စုံပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို...
မေလ (၁) ရက်နေ့မှ မေလ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ကာလအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား (၁၅၀) ယူနစ် အခမဲ့ ထပ်မံ ပေးသွားမည်
Breaking News , May 25, 2020
Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေး တိုးမြှင့်ခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ (၁) ရက်နေ့မှ မေလ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ကာလအတွင်း ပြည်သူများ၊...
ပြည်တော်ပြန်တွေကို ကြိုဆိုဖို့၊ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေကို စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရတော့ အားတက်မိပါတယ် (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)
ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မနေ့ကနဲ့ ဒီကနေ့၊ (၂)ရက်အတွင်း ပြန်ရောက်လာတဲ့ ပြည်သူပေါင်း (၂၀၀၀) ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒီလို အလုံးအရင်းနဲ့ပြန်လာကြဖို့ရှိတာကို ကြိုတင် ခန့်မှန်းထားပြီးဖြစ်လို့ အစီအစဉ်တွေလည်းလုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မူလကတော့ မေလဆန်းမှာ ပြန်လာကြမယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့တာပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ covidကို...
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလက ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသစဉ်က ဓာတ်ပုံအချို့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ပြန်ပေါ်လာတာကြောင့် ဦးတင်ဦးရဲ့ ကျန်းမာရေး ကိုစိုးရိမ်သူတွေက သတင်းမေးမြန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ အနီးကပ်နေထိုင်သူ တစ်ဦးက Yangon Nation ကိုပြောပါတယ်။ ...
ကျောင်းဖွင့်ချိန် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်တုံ့ပြန်နိုင်ရန် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ၊ ဆရာဆရာမများ၊ မိဘများ လိုက်နာရမည့် အစီအစဉ်များကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်ကြပြီး ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများတွင်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေကြကြောင်း သိရသည်။ ” COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကျောင်းဖွင့်ရမယ့်ရက် နောက်ဆုတ်ထားတယ်၊ အခုကာလ အတွင်းမှာ...
” ကျမဟာ သူရဲကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး၊ နစ်နာတယ်လို.လည်းမထင်ဘူး၊ ကျမတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်တာသာဖြစ်တယ် ” မေ့ဆေးဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန် (ဆေးရုံမှဆင်းချိန် ဝေဘာဂီဆေးရုံမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကိုအမှာစကား ပြောကြားချက် မှ)
ပြည်ဆေးရုံကြီးက မေ့ဆေးအထူးကဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ဟာ COVID-19 ရောဂါပိုး မတွေ.ရှိတော့တာကြောင့် ဒီကနေ. ၂၅-၅-၂၀၂၀ ရက် မနက်မှာ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးက ဆင်းခွင့်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမကြီးနဲ. ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီးက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ပျော်ရွှင်စွာနှုတ်ဆက်နေကြပုံတွေကိုဆရာမကြီးရဲ. လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေ ကူးယူဖေါ်ပြအပ်ပါတယ်။